NYI LYNN SECK 18+ DEN: ReadWriteWeb's Top 10 Products of 2009
တစ်ကမဿဘာလုံးက အင်တာနက် အသုံးပြုသူတွေရဲ့ ၂၀၀၉ ခုနှစ်အတွက် အကြိုက်ဆုံး Product တွေကို ReadWriteWeb ကနေ ဆနဿဒမဲ ကောက်ခံခဲ့ရာမှာ အဖြေတွေ ထွက်လာခဲ့ပာပြီ။ လူတွေအားလုံး ထင်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်း Twitter ကတော့ ထိပ်ဆုံးကနေ ဗိုလ်စွဲပြီး ၂၀၀၉ အတွက် အကောင်းဆုံး Product အဖြစ် ရွေးချယ်ခံခဲ့ရပာတယ်။ ** အမှတ်အသားနဲ့ ပြထားတာတွေက ကျွန်တှော နေ့တဓူဝ သုံးဖြစ်နေတဲ့ Application တွေပာပဲ။
Twitter (Micro Blogging) **
Google Chrome (Browser) **
Facebook (Social Network) **
WordPress (Blogging) **
Google Apps **
Adobe AIR **
Hulu (Online Movies)
TweetDeck (Twitter Client) **
Bing (Search Engine) **
Feedly (Social Bookmarking) **
Open Calais ()
Posterous (Email Blogging)
Mint (Free Financial Management Software) **
Tumblr (Blogging Platform) **
Tweetie (Twitter Client)
Wolfram Alpha (Semantic Search Engine) **
Woopra (real-time Web tracking and analysis application)
Posted by NLS at 12/20/2009 01:19:00 AM
4 Responses to “ReadWriteWeb's Top 10 Products of 2009”
Bro, thanks for the list. Now starting to use Posterous. Wish uahappy new year!!!
အစ်ကိုရေ လန်ဒန်ကပြန်လာတာ နေမကောင်းဖြစ်နေတယ်ဆို ကျန်းမာရေး ဂရုစိုက်အုံးနော်
ကျေးဇူး တင်ပါတယ် အစ်ကိုရေ...
Thanks for sharing,bro.